Smartphonelọ ọrụ ama ama laghachi na ọrụ site na China | Akụkọ akụrụngwa
Smartphonelọ ọrụ ama ama laghachi na ọrụ site na China
Ọ bụghị ihe niile ga-abụ akụkọ ọjọọ na mkpu, nri? Anyị na-ahụ otú site na mba ebe a mụrụ nje virus ahụ, na mgbe ọnwa ole na ole lụrụ ọgụ, ọ dị ka ha emeriwo nsogbu ahụ. Ihe akaebe nke nke a bụ nnukwu ụlọ ọrụ na mpaghara ama ama alaghachila na ọrụ na -emepụta na ọnụego mbụ.
N'ime izu ndị a, anyị mechara hụ otú Firlọ ọrụ ndị China na-ewebata ngwaọrụ ọhụrụ. Ihe nke anyi tufuru otutu. Ọ bụ nnukwu ọ joyụ ịhụ ka ekwentị ọhụụ si ụlọ ọrụ ndị anyị hụrụ n'anya laghachiri n'ahịa.
1 Realme, Xiaomi na Huawei na-ewetakwa smartphones ọzọ
2 New ngwaọrụ n'ihu ndị ọzọ «na oven»
Realme, Xiaomi na Huawei na-ewetakwa smartphones ọzọ
Mgbe oké ifufe ahụ dajụrụ. Na ọ bụ ezie na na Spen anyị ka na-emikpu n'ime oge na-adịghị agwụ agwụ nke ọnọdụ mkpuọ dị ka nke ahụ a na-ahụ ọkụ na njedebe nke ọwara ahụ. Anyị amabeghị ma ọ bụrụ na oge a ga-agbatịkwu maka ụbọchị 15 ọzọ ma ọ bụ. Mana anyị ji n'aka na ọ ga-agabiga ma anyị ga-alaghachi n'ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị.
Ọ bụ ihe na-agba ume ịhụ nke ahụ Chineselọ ọrụ ndị China dị mkpa dịka Realme, Xiaomi ma ọ bụ Huawei alaghachilarị na-arụ ọrụ nke ọma. Ofbọchị nke MWC 2020 dị ka nke dị anya na obere nke obere ndị nrụpụta gbachiri akwụkwọ na posta ruo mgbe ngwụcha nke ihe omume ahụ. Nke ahụ mere, anyị na-atụ anya na ọ ga-alọghachi n'oge na-adịghị anya ma anyị ga-anụ ụtọ ya.
Izu gara aga anyị gara ngosi nke ngwaọrụ ọhụrụ sitere na ezinụlọ Realme, Realme 6i nke rutere njikere ịga nke ọma n'etiti etiti. Nakwa Izu a anyị ahụla nkwa nke otu ụlọ ọrụ a maka ntinye ntinye na -emepụta akara satịlaịtị akpọrọ NARZO. N'oge a anyị maara naanị aha otu n'ime smartphones ọhụrụ ha, Narzo 10 na Narzo 10 A.
New ngwaọrụ n'ihu ndị ọzọ «na oven»
Mọnde na-esote ka a mara ọkwa ngosi nke Xiaomi Redmi Rịba ama 9S, ikpeazụ so mezue ọhụrụ nso nke Redmi Rịba ama 9. A ama na-ekwe nkwa ụfọdụ mmezi anya na ihe anyị nwere ike na-atụ anya na nke ahụ ga-apụta mmeghari ohuru nke Redmi Rịba ama 8 na ụdị ya niile.
Ọzọkwa, izu na-abịa, Na Machị 26, anyị nwere oge dị mkpa na Huawei. Tọzdee na-esote bụ ụbọchị ahọpụtara na kalenda iji mee ka "super top" ọhụrụ nke ika mara n'ụwa niile. Ọhụrụ Huawei P40 na P40 Pro ka akpọrọ ka amara n’ime ụbọchị ole na ole. Ihe na agba ndi ahia ume ma mmuo nke ndi n'eche ugbu a ịmaliteghachi ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Smartphonelọ ọrụ ama ama laghachi na ọrụ site na China
Elon Musk na-ekwu na ụlọ ọrụ ya na-ewepụta ume